पेट्रस रोमानस, साउन ३१, २०७१ | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 31 พฤษภาคม 2564
Petrus Romanus, मे ३१, इ.स. →
पेट्रस रोमानस, साउन ३१, २०७१
सन्देश 29 २ – – May१ मे २०२१ | सानो पेबल (littlepebble.org)
हाम्रो प्रभु: “पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा। आमेन म तिमीलाई अभिवादन गर्छु, मेरो प्यारो छोरो, भविष्यमा मेरो पवित्र घरको भिकार पृथ्वीमा! “
विलियम : हाम्रो धन्य आमाले अगाडि बढिदिनुभयो र मलाई पनि अभिवादन गर्नुभयो।
हाम्रो प्रभु: “प्रत्येक व्यक्ति संसारमा छ – र यस समयमा केवल केही आत्माहरू आत्मिक रूपमा तयार छन्, किनकि शैतानले उनीहरूलाई र मेरा सन्तानलाई पृथ्वीमा विश्वस्त पार्न कोशिस गरिरहेको छ, कि त्यहाँ कोही ईश्वर छैन र त्यो जीवन यसको लायक छैन। तर तपाईसँग भएको जीवनको मजा लिन, किनकि तपाईले पाउनुहुनेछ। यो अविश्वासीको विश्वास हो। म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु, मेरो छोरो विलियम, र आज रात यहाँ आएकोमा धन्यवाद। मलाई थाहा छ तपाईं पीडित हुनुहुन्छ, तर यो दु: ख धेरै नै बितेर जानेछ। “
विलियम: येशू अब आफ्नो धन्य आमालाई फर्काउनुहुन्छ। उनकी धन्य आमा अगाडि आउँछिन् र बोल्न पनि चाहन्छन्।
हाम्रो लेडी: “बुबा, छोरा र पवित्र आत्माको नाममा। आमेन “
“संसारका मेरा प्यारा बच्चाहरू। म, तपाईंको स्वर्गीय आमा, आज तपाईंलाई विशेष गरी यस समयमा प्रार्थना गर्न भन्नुहोस्, किनकि विश्व धेरै, धेरै परीक्षाहरूबाट पार हुँदैछ। को Vaccinations मानिसजातिको छ मेरो प्यारो छोराछोरी जबरजस्ती छन्: को कारण, यो, प्रिय बच्चाहरु स्वीकार छैन Vaccinations शरीर लागि हानिकारक छन् र चाँडै नै त्यहाँ अर्को हुनेछ भाइरस किनभने संसारमा र थप क्षति कारण फैलाउन हुनेछ, कुलीन र को Illuminati संसारको नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् र तिनीहरूले मानिसजातिको लागि हानिकारक छ दबाइ, लिन दुनिया inducing द्वारा यो। “
“प्यारा बच्चाहरु, मैले धेरै पटक यो प्रार्थना गरेको छु, बलिदान चढाओ र तपस्या गर। आफ्ना भाइ र बहिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्; धेरै मानिसहरू अन्धकारमा परेका छन्, किनकि शैतानले संसारलाई नियन्त्रण गर्दछ र पवित्रताका चीजहरू मानिसजातिको अधीनमा छन्। पवित्र स्थानहरूमा जानुहोस्, किनकि तपाईलाई सुदृढ पार्न धेरै अनुग्रहहरू पाउनुहुनेछ। त्यहाँ प्रस्ताव जारी, तपाईं जान सक्नुहुन्छ तर परमेश्वरले भरोसा धेरै ठाउँ हुन् माला र दया को Chaplet यी प्रार्थना मार्फत संसारको महान् गौरव प्राप्त किनभने,। “
“मानिसजाति खरानीले ढाकिएको छ – ज्वालामुखीको खरानी होइन तर पापको खरानी। प्रिय बच्चाहरु, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु प्रार्थना गर्नुहोस् र तपस्या गर्नुहोस् र स्वर्ग सुन्नुहोस्, किनकि हामी तपाईलाई धेरै माया गर्छौं र हामी पृथ्वीमा प्रत्येक जीवित आत्माको उद्धारको खोजी गर्दछौं। “
“ इल्युमिनाटीले विश्वको जनसंख्या घटाउन कोशिस गरिरहेको छ, किनकि उनीहरू धेरै मानिसहरूलाई जान्दछन्, जब उनीहरू परमेश्वरतिर फर्कन्छन् यसले हाम्रा बच्चाहरूको हृदयलाई परिवर्तन गर्दछ, तर लाखौं मर्दैछ – र त्यहाँ अझ धेरै हुनेछ – इलुमिनाटी र को कुलीन आफ्नो लक्ष्य हासिल। को एटिक्राईष्ट छ रोम र त्यो चर्च तल ल्याउन क्षण लागि प्रतीक्षा छ। त्यसकारण धेरै चर्चहरू बन्द भएका छन् किनकि मानवजातिले हाम्रो कुरा सुनेन। ”
” मेरा प्रिय बच्चाहरू, क्यालिफोर्नियामा ठूला विपत्तिहरू हुनेछन् । म तपाईंलाई प्रार्थना गर्न भन्दछु, किनकि यो प्रार्थनामार्फत दुष्टले रोक्छ – परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा काम। प्यारा केटाकेटीहरू, म तपाईंलाई माया गर्छु र म तपाईंको उद्धारको खोजीमा छु, किनकि यो मात्र चीजको लागि उपयोगी छ। ”
“ नेदरल्याण्ड्सका लागि प्रार्थना गर्नुहोस् , किनकि यस राष्ट्रमा ठूलो बाढी आउँछ। इ England ्ल्याण्डका लागि प्रार्थना गर्नुहोस् , किनकि यस देशलाई दण्ड दिइनेछ। ”
“मेरा प्यारा बच्चाहरू, तपाईंलाई दिइएका सबै भविष्यवाणीहरू तपाईंलाई पहिल्यै थाहा छ, तर याद गर्नुहोस् कि हामीले १०० बर्षदेखि बोकेका महान् चेतावनीहरू संसारमा छिट्टै आउनेछ। त्यसैले म तपाईंलाई प्रार्थना गर्न सोध्छु। प्रिय बालकहरु, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, र म तपाईलाई आशिष् दिन्छु: पिता र छोरा र पवित्र आत्माको नाममा। “
“मेरा प्यारा बच्चाहरू, बलियो बन, किनकि येशू, मेरो ईश्वरीय छोरा र म, तपाईंको स्वर्गीय आमा, तपाईंलाई धेरै माया गर्छौं र यस समयमा मेरो आवाज सुन्ने सबैलाई म आशिष् दिन्छु: बुबा र छोरा र छोराको नाममा Hoy भूत। आमेन
“सबै मा एक आँखा राख्नुहोस् Apparitions तिनीहरूले आउँदै 12 महिनाको लागि तयार गरिनेछ भनेर किनभने मेरो ईश्वरीय छोरा र म मानिसजातिलाई केही विशिष्ट सन्देशहरू डेलिभर गर्नेछ, हाल संसारमा। म तिमीलाई माया गर्छु प्यारा बच्चाहरु र म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु। बलियो रहनुहोस्: पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा। ”
विलियम : येशू र मरियम दुवैले मलाई भेट्न आउनुभयो।
हाम्रो प्रभु र हाम्रो साथी: “हामी तपाईलाई धन्यबाद दिन्छौं, मेरो छोरा: बुबा र छोरा र पवित्र आत्माको नाममा। आमेन
“नडराऊ प्रिय पुत्र, तपाईको पीडा चाँडै बितेर जान्छ र तपाईलाई नयाँ बनाउँदछ, किनकि मलाई थाहा छ तपाईले छोटो समयमा धेरै गर्नुपर्नेछ।”
विलियम : सेन्ट मेलचीसेडेक मकहाँ आउँछिन् र मेरो निधारमा चुम्बन गर्छन् र मेरो टाउकोमा गुलाबजस्तो चीज राख्छन् र भन्छन्:
SAINT MELCHISEDECH: “मेरो प्यारो छोरा म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु – एउटा उपहार जुन मसंग छ; त्यो वरदानले तपाईलाई अनुगमन गर्न, अझ स्पष्टसँग, र के भयो भनेर निश्चित गर्न ग्रेसले दिन्छ। म सधैं तिमीसँग हुनेछु, मेरो छोरो। शान्त हुनुहोस्: बुबा र छोरा र पवित्र आत्माको नाममा। आमेन
प्याद्रे पाईले पनि स्वीकार गर्दै:
PADRE PIO : “पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा। आमेन
विलियम : येशू र मरियम दुवैले भने कि तिनीहरू फर्केर आउनेछन् र मसँग कुरा गर्नेछन्। येशू र मेरी दुबै अन्य सन्तहरूसँग ह्वाइट क्रसमा फर्कनुभयो। म चन्द्रमा देख्छु – चन्द्रमाले केही हिट गरेको छ, मलाई थाहा छैन …